‘हिउँको तन्ना’मा बस्दा – मझेरी डट कम
‘हिउँको तन्ना’मा बस्दा
हाइकुमा तीन हरफ १७ अक्षर हुन्छन्। पहिलो हरफमा ५, दोश्रोमा ७ र तेश्रोमा ५ अक्षर हुन्छन्। जापानी कविताको शास्त्रीय शैलीमा सबभन्दा सानो एकाइमा लेखिने कविता हो यो। नेपालीमा विष्णुवहादुर सिंहको ‘मौन वतास’ हाइकु संग्रह, ‘फूलको वर्षा’ तान्का संग्रह र ‘मैनवत्ती’ चोका संग्रह प्रकाशित छन्। नेपालीमा यो क्रमबद्ध प्रकाशनले यस क्षेत्रका अध्येतालाई यौटा सटिक दिशा निर्देश गर्दछ। यसै क्रममा कृष्ण बजगाईंको यो कृति यौटा दरिलो स्तम्भको रुपमा प्रस्तुत छ।
यो ‘हिउँको तन्ना’ले नेपालका तथा डायास्पोराका समसामयिक वस्तु र कलाको नवीनतम प्रयोग डायास्पोराको नेपाली साहित्यमा प्रस्तुत गरेको छ। यसका दुई पक्ष छन्। ती हुन्– वस्तु पक्ष र कला पक्ष।
आजको मूल प्रश्नलाई कविले ‘एरेष्ट’ गरेका छन् यहाँ। विश्वमा भैरहेका युद्ध र तिनबाट मुक्ति हो। बन्दुकको भरमा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिमाथि शाशन गर्न खोज्नु र यौटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमाथि आधिपत्य जमाउन खोज्नु आजको समसामयिक विश्वराजनीतिको दुर्योग हो। ‘अहम्’ आवश्यक हो, स्वाभिमानको रक्षा मानवीय अस्तित्वको रक्षा हो। तर अहङ्कार गर्दै ठूला राष्ट्रले साना राष्ट्रमा गरिएको हस्तक्षेपले कुन राष्ट्र वा व्यक्तिको मौलिक हकको सुरक्षा हुन सक्छ? मिथमा हिरण्याक्षले पृथ्वीलाई मान्द्रो बेरेर खाए जस्तै बन्दुकका नालीले नै मानवीयता निलेर भित्रै थुनेमा आजादी कहाँ? कविको यो हाइकुले आज राष्ट्र र व्यक्तिलाई आफ्नो मानवीय हकको सुरक्षा र मानवीय लुप्त गौरवको पुनर्प्राप्तिको लागि प्रतिरोध युद्धमा होमिन आह्वान गरेको छ। यो हाइकुको सानो टुक्रो तानाशाहको लागि ‘एटमबम’को रुपमा उपस्थित छ।
नेपालको आज संघीय गणतन्त्रको राजनैतिक विधान बनाउने सन्दर्भमा मधेश एक प्रदेशको चलिरहेको आन्दोलन र अशान्तिलाई संकेत गरी लेखिएको हाइकु हो यो। दुबैतिर आगो लागेपछि ‘म’ ((नेपाली) कहाँ जाने शरणार्थी भैन? म जस्तै के तिमी तपाईहरू होइन? शान्त राष्ट्रको सपना कहाँ? यो कुरालाई यसले इङ्गित गरेको छ।
यौन, शृङ्गारिक वा विवाह
साहित्यको भाषा वेद, वाइबलको र ऐनकानुनको जस्तो नभएर यस्तो रसिलो हुनुपर्छ भन्न पनि यो विप्रलम्भ शृङ्गारिक हाइकुले आधार दिन्छ :
रोमान्सेली हाइकुका केही अरु उल्लेखनीय नमुनामध्ये यो तलको हाइकु अति राम्रो व्यङ्ग्य, प्रकृतिसित मानवीय शृङ्कार रसको जडान अनुपम भएको मैले पाएँ।
यस्ता रोमान्स, शृङ्गार, प्रणय, विवाह र यौन सन्दर्भका उदाहरण धेरै छन्।
‘हिउँको तन्ना’ हाइकु संग्रहले आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, दैवी, मनोवैज्ञानिक, विवाह, यौन, नारी स्वतन्त्रता, डायास्पोरा, भाषा र साहित्य, र जीवन वोधका विषयमा शूक्ष्मतम आलोक प्रक्षेप गरेको छ।
यो हाइकुमा ‘लजाउनु’ वस्तु हो, किन भन्दा वा हेतु वा के हो? भन्दा गाउँखाने कथा जस्तै अर्थ रहस्यभित्र लुकेको छ? जुन त्यहीं कविले तेश्रो हरफमा प्रस्तुत गरेका छन् –नवमञ्जरी। यसरी हाइकु ओदान जस्तै तीन खुट्टालाई उनिएको छ। दुई खुट्टे लड्न सकछ चार खुट्टे पनि लड्न सक्छ तर तीन खुट्टे हाइकु कहिल्यै लड्न सकदैन र यसले छेडेको वाग्वाणको निसाना अति तीव्र गतिको र लक्ष्य वेधक सटिक व्यञ्जनामा टिकेको हुन्छ। त्यसैले हाइकु लेख्दा पहिलो हरफमा वस्तु के हो त्यसको उठान भनौं वीज राप्नु दोश्रो हरफमा त्यसको हेतु वा कारण दिनु जसले पहिलो हरफ र तेश्रो हरफको सेतुको काम गर्दछ। तेश्रो हरफले रहस्यको उद्घाटन गर्नु यानि उत्तर दिनु वा परिणाम घोषणा गर्नुपर्दछ।
उक्त हाइकु कहाँ? के? कहिले? यिनी तीन खुट्टाले टेकेको छ र विशेष भाव ‘लाज’को सुरक्षा गरेको छ।
यो हाइकु ऋतुले बनेको छ। शरदको घामको प्रयोग त्यसमा भोगटेको अचार खाँदा हुँने अमिलोपन तर त्यसको अविस्मरणीय स्वादसित ‘प्रसव पीडा’लाई अनुवन्धित गरिएको छ।
‘हिउँको तन्ना’ हाइकु संग्रहमा त्रिकोणात्मक, विशिष्ठभाव बोकेर प्रकृतिको परिवेशमा १७ अक्षरी ३ हरफे ५,७,५को वर्ण क्रममा भएका हाइकुहरु संरचना गर्न कृष्ण बजगार्इं पोख्त छन्।
मिथलाई ल्याएर बिम्बको रुपमा प्रस्तुत गरी अभीष्टको बोध गराउन खाजेको ठाउँमा पौराणिक बिम्ब हुन्छ। त्यस्तो प्रयोगमा कवि पछि परेका छैनन् यहाँ। समाज नै हो तर आजको युद्धको कारणप्रति व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन्– जहाँ जो जे हुनुपर्ने हो त्यो छैन र हुदैन अनि युद्ध न भए के हुन्छ! शान्ति कसरी हुन्छ। यो आजको समयको विडम्बना पनि हो। बिडम्बना छ हरएक कोणमा, महाभारत छ हरएक मोडमा। आजका विडम्बना र विसङ्गतिको उद्बोध हो यो ‘हिउँको तन्ना’ हाइकु सङ्ग्रह।
यो आज वैवाहिक संस्थामा व्यङ्ग्यको अनौठो नमुना हो। यी हाइकुहरूको अन्तरङ्गमा पुग्न ध्वन्यालोक पाठकभित्र पनि हुनुपर्छ अन्यथा स्वादको परम्प्राप्ति सम्भव छैन। हाइकुको अन्तस्तल न छोई ‘भो अघाएँ, क्या मजा आयो! पुग्यो’ भनेर पाठकले टड्कार्छ, त्यस बेला उसलाई यो थाहा हुन्न कि भिजन भए अझ कति सद् चिद् र आनन्दको अनुभूतिले रसाप्लावित हुन सक्थ्यो ऊ (पाठक)! आआफ्नो अध्ययन क्षमता अनुकुल पाठकलाई रसास्वादन गर्न दिनु पनि उत्तम काव्यको अभिलक्षण हो। त्यो कलामा लक्षणामा भएका यी हाइकुको वरिय स्थान छ।
जापानको चार सय वर्ष पुरानो यो हाइकुलाई नेपालमा आजको स्थितिमा ल्याइपुराउन यस्ता कृतिको महत्वपूर्ण योगदान रहेको थियो र आज पनि विष्णुवहादुर सिंहको ‘मैन बत्ती’ चोका संग्रह र कृष्ण बजगाईंको यो ‘हिउँको तन्ना’ जस्ता यो फाँटका नयाँ प्रयोगले निरन्तरता पायो भने हाइकु विधालाई फलाउन फुलाउन केही कठिन पर्नेछैन भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ।